10 Qodob Oo Caruurtaada Ka Dhigaya Kuwa Waxbarashada Ku Guulaysta - Daryeel Magazine
10 Qodob Oo Caruurtaada Ka Dhigaya Kuwa Waxbarashada Ku Guulaysta
• Joogtaynta ardayga ee fasalka (improved attendance)
• U suuragelinta ardayga dhameystirka howsha waxbarashada ee guriga (Timely homework completion) waqtiga loogu talagalay
• Horumarinta tayada wabarshada ardayga (improved student achievement)
• Sare u qaadida hamiga waxbarashada (higher educational aspirations)
• Sare u qaadida tayada waxbarida ee barayaasha (improve teachers’ effective teaching)
1. Waalidku waa in ay ogaadaan in guusha waxbrashada carurteena ay ku xiran tahay hadba inta aan juhdi la gelino waxbarashadooda iyo la socodkeeda.
2. Waalidku waa in ay xil gaar ah iska saaran fahmida iyo barashada nidaamka waxbarashada iyo kaalinta ay ku yeelan karaan waxbarashada caruurta.
3. Waa in aan ka abuurnaa guryaheena jawi munaasab u ah waxbarasho. Sida waqti goan in loo cayimo daawashada telefiishiinka iyo in haddii durufta saamaxdo la sameeyo meel gaar u ah waxbarashada.
5. Waaa in aan xaqiijinaa subax kasta u diyaargarowga caruurta waxbarasho. Sida in la xaqiijiyo nadafada dharka, jirka, buugaagta, qalmaanta iyo in cunto u qaatan dugsiga
6. Waa in caado laga dhigto in la weydiiyo caruurta marka dugsiga (school) ka yimaadaan waxii maalintaa kala soo kulmeen dugsiga, waxii ku adkaa, waxii uu aad uga helay iyo haddi loo soo dhiibay ee laylis ah
8. Hadii ay kuu cadaato in ay duruustu ku adag tahay, geey meelaha laga caawiyo ardayda (homework centre) ama macalin gaar ah u qabo (home tutor).
10. Maadaama ay suurogal tahay in an maqaalkan akhrintiisa awood aney u wada helin dadka u baahan ,fadlan qofkii akhristow ku dabaq qoyskaada iyo siiba caruurtaada waalid
10 Qodob Oo Kaa Dhigaya Qof Naftiisa Ka Adag, Noloshiisa Hanan Kara Si Wanaagsanna U Fikiraya